नेपाली महिलाहरूमा पनि नयाँ ट्रेन्ड : चालीस कटेपछि ब्वाइफ्रेन्ड ! - Sindhuli Saugat
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ मंसिर २५ गते मंगलवार काठमाडौं
अनुराग र स्मृतिको उमेरको फरक झन्डै ८ बर्ष छ । स्मृति ४१ कि भइन्, अनुराग ३३ का । यो जोडी (दुवैको नाम परिवर्तन) बिहे गरी जापानको टोकियो सहरमा बसेका छन् । स्मृति जापान बसेको १३ बर्ष भयो, अनुराग पुगेको बल्ल २ बर्ष । स्मृतिले नै अनुरागसँग बिहेको प्रस्ताव गरिन् र जापान बोलाइन् । २ बर्ष त उनीहरूको प्रेम नै चलेको थियो । नेपाल आएका बेला अनुुरागसँग स्मृति रमाउने गर्थिन् । स्मृतिको एक सन्तान छन् । नेपालमा कम पारिश्रमिकमा सामान्य कम्पनीमा काम गरेका अनुरागले पनि धेरै सोचविचार गरेर स्मृतिसँग प्रेम र बिहे गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
जोडी खुसी छ, सुखी छ । बेलामौका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो जोडीको ‘प्रेमालिंगन’मा बाँधिएको तस्बिर पनि सार्वजनिक हुन्छ । अनुराग भन्छन्,‘एक बारको जुनीमा जीवन बिताउनु हो, अहिले खुसी छु । नेपाल फर्किएँ भने राम्रो व्यावसाय खोल्ने आर्थिक हैसियत बनेको छ ।’
विदेशमा मनग्य आम्दानी गर्ने एकल महिलाले अहिले जीवनको उत्तरार्धलाई साथीको साथका लागि ब्वाइफ्रेन्ड वा पति खोज्ने चलन बढ्न थालेको छ । यसलाई समाजशास्त्रीले मन मिलेको खण्डमा राम्रो निर्णयका रूपमा लिन्छन् । एकल जीवन भन्दा जोडी भएर जीन्दगीमा रमाएको नै राम्रो ठानिन्छ पनि ।
केही जोडीले बिहे नै गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालमा ४० कटेपछि ब्वाइफ्रेन्ड बनाउने ट्रेन्डजस्तै भएको छ । पतिसँग दनादन सम्बन्ध विच्छेद भएपछि मुलतः दुईवटा आवश्यकताका लागि सम्पन्न एकल महिलाले यस्तो प्रस्ताव र निर्णय लिने गरेका छन् । पहिलो शारिरीक आवश्यकता (सेक्स) र दोस्रो जीवनसाथी बनाउने चाहना ।
हेमन्त रानाले बाध्यताले परदेश भासिएका नेपालीको पीडालाई गीतमा उनिदिए– साइँली चालीस कटेपछि रमाउँला ! यो नेपालको ग्रामिण बस्तीको दम्पत्तीको बाध्यताको दुख हो । तर, नेपालकै सहरीया, धनाड्य, नवधनाड्य र हाइप्रोफाइलमा भने ठ्याक्क यसको उल्टो हुनेगरीको सौख बढ्न थालेको छ । ४० कटेपछि ब्वाइफ्रेन्डसँग रमाउँला !
कतिपयले उमेरमै सन्तान पाएर सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि राम्रा र सम्भ्रान्त मुलुक पछ्याए । यस्ता महिलाहरूले ४० कटेपछि ब्वाइफ्रेन्डमात्र होइन, बिहेका लागि केटा नै खोज्ने ट्रेन्ड बस्न थालेको छ । जीवनको उत्तरार्धको साथीका लागि २८ देखि ३५ बर्षसम्मका अविवाहित युवा बिहे गर्ने ट्रेन्ड विकास भएको छ ।
रबीन र सृष्टि (नाम परिवर्तन) सामाजिक सञ्जालमा जोडिए । उनीहरूको कुराकानी हुन थाल्यो । रबीन २९ बर्षदेखि उकालो लाग्दै थिए । सृष्टि ३९ बर्षकी भइन् । १० बर्ष कान्छा रबीनलाई प्रेमी बन्न प्रस्ताव गरिन् । र, अमेरिका पुगेर बिहे गर्ने भनिन् । रबीन पनि तयार भए । दुवै अहिले प्रेममा छन् । बिहे भएको छैन । सृष्टि अमेरिका तिर छिन्, रबीन भिसा कुरेर बसेका छन् । भन्छन्,‘युवतीको उमेरचाहीँ कम र युवाको धेरै हुनुपर्छ भन्ने छ र ? हामी प्रेममा छौं ।’ सृष्टि १० बर्षअघि बिहे हुनासाथ पतिसँग अमेरिका पुगेकी थिइन् । ग्रिनकार्ड भएपछि उनको सम्बन्ध विच्छेद भयो । तर, सन्तान छैनन् । अब यो जोडी खुसीसाथ जीन्दगी कटाउन तयार भएको छ ।
काठमाडौंमा पनि उच्च घरानीया महिलाहरू पति हुँदाहुँदै पनि प्रेमी बनाउन पछि पर्दैनन् । घरमा सम्बन्धको रस बलियो नभएपछि बाहिर लक्का जवानमाथि खर्च गर्ने चलन स्वभाविक जस्तै बन्ने गरेको छ, हाइप्रोफाइलमा ।
त्यसो त यस्ता प्रकृतिका प्रशस्त उदाहरण नेपालका सेलिब्रिटीमा पनि देखिएका छन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले आफूभन्दा कान्छा अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँग बिहेको मिति नै फिक्स गरिसकेकी छन् । उनी अहिले जोशीसँग प्रेमरागमा रमाइरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा नै पोष्ट गर्न भ्याइन् ।
नेपाली समाजका आधारमा यस्ता घटना नौला देखिए पनि पश्चिमा मुलुकमा साधारण हुन् । त्यसो त बलिउड अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले पनि आफुभन्दा १० बर्ष कान्छा निक जोनससँग भर्खरै बिहे गरेकी छन् । ‘सम्बन्ध र प्रेम कोसँग कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा होइन, जोसँग पनि हुनसक्छ’, समाजशास्त्रीहरू भन्छन्,‘त्यो सम्बन्धको नियत कस्तो छ भन्नेचाहीँ ठूलो कुरा हो ।’
त्यसो त संसारका शक्तिशाली व्यक्ति पनि आफूभन्दा अधिक उमेर भएका महिलासँग बिवाह बन्धनमा रहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसमध्येका एक हुन्, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएर म्याक्रों । उनकी पत्नी ब्रिगिट म्यांक्रोन २४ बर्ष जेठी हुन् । एउटा पुस्ता नै जेठी ।
त्यसो त लेखक पाओलोले पनि आफूभन्दा उमेरदार नारीसँगको प्रेमका बारेमा खुलाएका थिए । उनले भनेका छन्,‘मैले कारोलिना –पत्नी)लाई एउटा पार्टीमा साथीका माध्यमबाट भेटेको थिएँ । उनी मेरा लागि पूर्ण जीवनसाथी हुन् भन्ने ठानें । म ३९ र उनी ५५ बर्षका थियौं । हाम्रो सम्बन्ध आधुनिक थियो, यो सेक्सले बनेको थिएन । विश्ववास, सम्मा र मायाले बनेको थियो ।’ २५ बर्षसम्म निरन्तर यो जोडीमा कुनै समस्या नआएको उनले खुलाएका थिए ।
तर, नेपालमा सुरु भएको ट्रेन्ड यति गहिरो र निस्वार्थ हुनसक्छ ? समाजशास्त्रीहरू पनि अलमलमा छन् ।
पछिल्लाे - कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रतिवद्धता सहितको हस्ताक्षर
अघिल्लाे - विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेलबाड !